Mareykanka oo xayiraadda ka qaadaya qaxootiga 11 dal – Radio Daljir
Janaayo 30, 2018 7:41 b 0
Dowladda Mareykanka ayaa xayiraadda ka qaadaysa qaxootiga kow iyo toban dal oo horay madaxwaynaha Mareykanka uu ugu soo rogay xayiraad dhanka socdaalka ah.
Go’aan kasoo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in xayiraadda socdaalka Mareykanka laga qaadayo kow iyo tobanka dal ee horay loo mamnuucay qaxootigooda inay tagaan Mareykanka kuwaasi oo kala ah Masar, Iran, Iraq, Libya, Mali, North Korea, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, iyo Yemen Yemen.
Maamulka Trump ayaa sheegay in la fasaxay socdaalka, balse qaxootiga la marin doono baaritaano adag.
Sarkaal sare ayaa sheegay in waraysiyo lala yeelanayo qaxootiga kahor inta aanay tagin Mareykanka oo si qoto dheer lagu ogaanayo waxa ay yihiin, waxaana ay si rasmi ah u dhaqan geli doontaa bishii March.
Maamulka Trump ayaa soo wajahay cambaarayn uga imaanaysay ururada qaxootiga iyo jaaliyadaha dalalka Muslimka oo kusaabsan xanibaadda uu kusoo rogay dalal gaar ah, waxaana maamulka Trump uu ku dooday mid uu ku difaacayo danaha Mareykanka iyo kahortagista khataraha argagaxisada.
QM oo toban milyan oo doolar ugu deeqday Oromada iyo Soomaalida Itoobiya